किन मनाइन्छ नागपञ्चमी ?
साप्ताहिक संवाददाता , श्रावण ३१, २०७५
सतहमा आएका सर्पले आफ्नो आहाराका लागि यत्र–तत्र विचरण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी विचरण गर्ने क्रममा कतिपय सर्पले मानिसलगायत घरपालुवा जनावरलाई आक्रमण गर्ने सम्भावना हुन्छ । त्यस्तो अनिष्ट नहोस् भनेर हिन्दूहरूले नागको पूजा गर्ने, उनीहरूलाई आहाराको जोहो गरिदिने दिनका रूपमा नागपञ्चमी मनाउन थालेका हुन् । पुरा पढ्नुहोस्
नागको उत्पत्ति कथा
दक्ष प्रजापतिका कन्या अर्थात् छोरी मात्र थिए । दक्षका तिनै छोरीलाई उनीहरूका काका कश्यप ऋषिले पत्नीका रूपमा ग्रहण गरे । कश्यपका ३३ कोटी पत्नी थिए । तीमध्ये एक थिइन्— कद्रु । तिनै कद्रुबाट विभिन्न प्रकारका नाग वा सर्प जन्मिए । पुरा पढ्नुहोस्
सर्पको कान हुँदैन, त्यसैले त्यसले जमिनमा हुने कम्पनका आधारमा आफ्नो वरिपरि केही वा कोही भएको अनुमान गरेर आफ्नो टाउको उठाएर प्रतिक्रिया जनाउँछ । यसैकारण सर्प ज्यादै चनाखो र शत्रुप्रति अनुदार हुन्छ । सर्पले आफ्नो वरिपरिको गन्ध थाहा पाउन नाकको नभै जिब्रोको सहयोग लिन्छ ।पुरा पढ्नुहोस्
सर्पको यौन क्रियाकलाप रमाइलो पनि हुन्छ । यौन सम्पर्क गर्नुअघि भाले र पोथी सर्प दुवैले एक–अर्कालाई छल्ने, जिस्क्याउने आदि काम गर्छन् । छल्ने, जिस्क्याउने क्रममै उनीहरू एक–अर्काप्रति यौनिक रूपमा आकर्षित हुन्छन् । पुरा पढ्नुहोस्
चलचित्र नआउँदै चर्चामा
केही वर्षअघि बुटवलमा सम्पन्न अल नेपाल डान्स च्याम्पियनसिपमा उद्घोषण गरेर धेरैलाई आश्चर्यचकित तुल्याएका क्रिजनको उद्घोषण शैली देखेर दर्शक मात्र होइन, भारतको मुम्बईबाट आएका विशेष निर्णायक एवं चर्चित नृत्य प्रशिक्षक टेरेन्स लुइससमेत प्रभावित भएका थिए । लुइसले क्रिजनबाट प्रभावित भएर एक महिने नि:शुल्क प्रशिक्षणका लागि उनलाई मुम्बईसमेत पुर्‍याएका थिए । पुरा पढ्नुहोस्
मन फर्कियो भूपू मायामा
एजेन्सी, श्रावण ३१, २०७५
पछिल्ला वर्षमा सलमान र कैटरिनाका सम्बन्धमा बलिउडमा थुप्रै टीका–टिप्पणी हुने गरेको छ । धेरैले उनीहरू थप नजिकिँदै गएको बताउन थालेका छन् । एउटा नेपाली गीत छ— पीपल छायाँमा फेरि मन फर्कियो भूपू मायामा कहीं सलमानको मन भूपू मायामा फर्किएको त होइन ? पुरा पढ्नुहोस्
अहिले पश्चिमी मुलुकमा मास्टुरडेटिङ लोकप्रिय हुन थालेको छ । मास्टुरडेटिङ शब्द यौनिक विषयसँग सम्बन्धित लागे पनि यो आफैंले आफूलाई आनन्द प्रदान गर्ने कला हो । यो कलामा कुनै पनि व्यक्तिले एक्लै आफूलाई मन परेको सिनेमा हेर्न लाने, राम्रो रेस्टुराँमा गएर खाने वा कुनै ठाउँमा पुगेर घुम्ने भन्ने हुन्छ । पुरा पढ्नुहोस्
नरेन्द्र रौले, श्रावण ३१, २०७५
सँगै बसेको मानिसले खाजा खाएको, पानी पिएको देख्दा र उनीसँग कुराकानी गर्दा उपन्यासको पात्र फेलापरे जस्तो लाग्छ । गाउँतिर छोटो यात्रामा पनि मानिसहरू एक–अर्काप्रति हार्दिकता देखाउँछन्, काठमाडौंमा भने बोल्दैनन् । न्यौपानेको बुझाइमा सहरका मानिसहरूको आँखामा कुनै सपना देखेजस्तो, एकोहोरो भाव देखिन्छ । पुरा पढ्नुहोस्
बितेको एक वर्ष क्याटलिनका लागि निकै दुखद रह्यो । पहिले उनको अन्तरङ तस्बिर तथा भिडियो लिक भएको थियो । श्रीमान्सँग सम्बन्ध विच्छेद भएपछि उनको जीवनले अर्कै मोड लियो । ३१ वर्षीया क्याटलिनको खास नाम सेलेस्ट बोनिन हो र उनी अमेरिकाको फ्लोरिडामा जन्मिएकी थिइन् । पुरा पढ्नुहोस्
पृथ्वीमा उपलब्ध सर्पमध्ये सबैभन्दा विषालु नभए पनि राजगोमन सर्पको विष सबैभन्दा महँगो मानिन्छ । १ ग्यालेन राजगोमन सर्पको विषको मूल्य १ लाख ५३ हजार डलर पर्छ । राजगोमनको १ ग्यालेन विष एउटा हात्तीको बथानलाई मार्न पर्याप्त हुन्छ । पुरा पढ्नुहोस्